Afar Waxyaabood Oo Muhiim Ay Tahay In Guurka Kahor aad Kala Hadasho Lamaanahaaga | Aayaha
Waa inaad si buuxda u diyaar garoowdaa kahor intaadan guursan. Waxaa jira waxyaabaha qaar oo waajib kugu ah inaad kala hadasho lamaankaaga/lamaantaada kahor intaadan dhihin haye.
Marnaba ha yareysan awoodda lacagta ee guurka, waxaa jira guur badan oo u burburay dhibaatooyin lacag. Kahor intaadan guursan, waa in lamaankaaga /lamaantaada aad iskala hadashaan arrimaha dhaqaalaha. Labadiina waxaad u baahantihiin inaad ogaataan haddii labadiinaa aad qoys taageeri kartaan, sida lacagaha biilasha ah loo bixinayo iyo haddii mid idinka mid ah uu leeyahay lacag.
2. Noqoshada waalid
Waa inaad ogaataa in dadka qaar aysan rabin guur awlaad la dhalaayo. Waxaad u baahantahay inaad kala hadasho inaad yeelataan caruur iyo in ninkaaga ama naagtaada ay rabto caruur. Inaad ka naxdo markaad xoogaa wada noolaataan kadib ayaa laga yaabaa, isla markaana lamaankaaga/lamaantaada aysan daneyneyn caruur.
3. Halka lagu noolaanaa
Halka lagu noolaanaa marka la isguursado waa sheeko kale oo aad u baahantahay inaad kala hadasho lamaankaaga mustaqbalka. Dadka qaar waxay doorbidaan inay qoyskooda la joogaan halka kuwo kale ay rabaan in meel kale ay degaan. Haddii labadiina ku noolaaneysaan magaalooyin kala duwan guurka kahor, waa sheeko ubaahan in laga wadahadlo.
Waa inaadan kula heshiin guur aadan kawada hadlinina ujeedooyinka mid walba uu leeyahay, haddii ujeedadaada ay ka duwantahay tiisa, waxaad ubaahantahay inaad dib uga fekerto xiriirkaas.
Arrinta ugu weyn ayaa ah inta ujeedo gaar ah uu isaga ka leeyahay guurka adigana aad tahay qof daacad ah oo ay dhab ka tahay inuu guri mustaqbal leh yagleelo marka waxaa loo baahantahay inaysan taas kaa hoos bixin.
Calaamadaha Lagu Garto Marka Saaxiibada Lamaanahaaga Ay Doonayaan Inuu Ku Naco